पार्टीभित्रको द्धन्द्ध व्यवस्थापनको दायित्व नेतृत्वकै हो : अर्जुननरसिंह केसी - Enepalese.com
पार्टीभित्रको द्धन्द्ध व्यवस्थापनको दायित्व नेतृत्वकै हो : अर्जुननरसिंह केसी
इनेप्लिज २०७५ असोज ३० गते ११:१९ मा प्रकाशित
नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद बढ्दै गएको छ । पार्टी र भातृ संगठन नेवि संघको विधानको विषयले नेताहरु विभाजित भएका छन् । सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको अवस्थाम पनि कांग्रेसको भूमिका बलियो बन्न सकेको छैन । यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर ऋषि धमलाले नेता अर्जुननरसिंह केसीसँग कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
कांग्रेसका वौद्धिक नेता चक्रप्रसाद वास्तोलालाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?
चक्रजीको भूमिका विद्यार्थी जीवनकालदेखि २०६९ सालसम्म लोकतन्त्रका लागि धेरै योगदान दिनुभयो । उहाँले दिएको योगदान कसैले पनि विर्सन सक्दैनौँ । आफ्नो विचारमा स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो । उहाँको निधनलाई हामीलाई स्तब्ध बनाएको छ । उहाँले राजनीतिक र कुटनीति दुवै क्षेत्रमा योगदान दिनुभएको थियो ।
तर उहाँ अर्धचेत अवस्थामा रहँदा कांग्रेसले वेवास्ता गर्यो भन्ने आरोप छ नि ?
उहाँ जुनबेलादेखि विरामी हुनुभयो त्यसबेलादेखि नै पार्टीले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पूरा गरेकै थियो । पार्टीले उहाँलाई गर्नुपर्ने सम्मानमा कुनै कमी थिएन ।
नेपाली कांग्रेसको विधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
विधानको विषयमा कुनै टुङ्गो लागेको छैन । प्रारम्भिक रुपमा मस्यौदा समितिमा भएको सहमति स्पष्ट भइसकेको छैन । छलफल जारी छ ।
महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधीहरुको संख्यामा सहमति भएको हो ?
सहमति भइसकेको छैन । विधानका बारेमा केन्द्रिय समितिमा छलफल भएपछि मात्रै टुङ्गो लाग्छ । केन्द्रिय समितिबाट महासमिति बैठकमा जान्छ ।
नौ जना पदाधिकारी राख्ने विषयमा सहमति भएको हो ?
अहिले मस्यौदा समितिमा मात्रै छलफल भएको हो । केन्द्रिय समितिले सहमति नगरेसम्म विधान संशोधन हुँदैन ।
नेपाल विद्यार्थी संघको विधानका बारेमा तपाईहरुले किन नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुपर्ने अवस्था आयो ?
कांग्रेसको कुनै पनि भातृ संगठनको विधान सम्बन्धित संगठनले नै संशोधनको प्रस्ताव गर्नुपर्छ । त्यसलाई केन्द्रिय समितिले पारित गर्ने हो । तर अहिले त नेविसंघको विधान पार्टीले नै संशोधन गर्न खोज्यो । भातृ संस्थाले बनाएको विधान प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा अर्कै कुनाबाट विधान ल्याइयो । त्यसैले नोट अफ डिसेन्ट लेखिएको हो । यस विषयमा सहमति खोज्ने काम नेतृत्वको हो ।
पार्टी नेतृत्व चुकेकै हो त ?
सबै व्यवस्थापन नेतृत्वले नै गर्नुपर्छ । पार्टीभित्रको द्धन्द्ध व्यवस्थापनको दायित्व नेतृत्वकै हो । बहुमतका आधारमा मात्रै काम गर्ने हो भने विवाद साम्य हुँदैन ।
सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सकेको छैन । बलात्कार, हत्या, हिंसा जस्ता अपराधका घटना बढिरहेका छन् । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन सकेको छैन । लोकतन्त्रमाथि हस्तक्षेप भएको छ । यसले जनतामा आक्रोष पैदा भएको छ । सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हाम्रो पनि चाहना हो । तर सरकारले भनेजसरी काम गर्न सकेन ।
यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेस कमजोर देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा विवाद मिलाउनुपर्नेंमा किन बढिरहेको छ ?
नेपाली कांग्रेस संसद र जनस्तरमा खस्किएकै हो । यो अवस्थालाई सुधार गर्ने क्रममै छौँ ।